1 Okwu Jehova wee ruo Jona,+ nwa Amitaị, ntị, sị: 2 “Bilie, gaa Ninive+ bụ́ obodo ukwu ma kwusaara ya na ihe ọjọọ ha erutewo n’ihu m.”+ 3 Jona wee bilie gbapụ n’ihu Jehova+ gawa Tashish;+ e mesịa, o rutere Jọpa+ ma hụ otu ụgbọ mmiri na-aga Tashish. O wee kwụọ ụgwọ ụgbọ ahụ ma banye n’ime ya ka o soro ha gaa Tashish, wee gbapụ n’ihu Jehova. 4 Jehova wee mee ka oké ifufe fekwasị oké osimiri+ ahụ, e wee nwee oké ebili mmiri+ n’oké osimiri ahụ; ụgbọ mmiri ahụ wee chọwa ikpu ihu. 5 Ndị na-arụ ọrụ n’ụgbọ mmiri ahụ wee tụwa egwu, na-eti mkpu enyemaka, onye nke ọ bụla ana-etiku chi ya.+ Ha wee na-atụnye ngwongwo ndị dị n’ụgbọ ahụ n’ime oké osimiri iji mee ka ịdị arọ nke ụgbọ ahụ belata.+ Ma Jona gbadara n’ala ala ụgbọ ahụ, wee dinara na-arahụ ụra dị omimi.+ 6 Ka oge na-aga, onyeisi ụgbọ ahụ bịakwutere ya wee sị ya: “Gịnị na-eme gị, ohi ụra? Bilie, kpọkuo chi gị!+ Ma eleghị anya, ezi Chineke ga-anụrụ olu anyị, anyị ewee ghara ịla n’iyi.”+ 7 Ha wee malite ịgwarịta ibe ha, sị: “Bịanụ ka anyị fee nza,+ ka anyị mata onye ọ bụ n’ihi ya ka anyị ji enwe ọdachi a.”+ Ha wee na-efe nza, n’ikpeazụ, nza ahụ mara Jona.+ 8 Ha wee sị ya: “Biko, gwa anyị, ọ̀ bụ n’ihi onye ka anyị na-enwe ọdachi a?+ Gịnị bụ aka ọrụ gị, ọ̀ bụkwa ebee ka i si bịa? Ebee bụ obodo gị, onye ebee ka ị bụ?” 9 O wee sị ha: “Abụ m onye Hibru,+ ọ bụ Jehova Chineke nke eluigwe,+ bụ́ Onye kere oké osimiri na ala akọrọ,+ ka m na-atụ egwu.”+ 10 Ndị ikom ahụ wee tụwa egwu nke ukwuu, ha wee jụọ ya, sị: “Gịnị bụ ihe a i mere?”+ N’ihi na ndị ikom ahụ amatawo na ọ bụ n’ihu Jehova ka o si na-agbapụ, n’ihi na ọ gwara ha. 11 E mesịa, ha jụrụ ya, sị: “Gịnị ka anyị ga-eme gị,+ ka oké osimiri a wee daara anyị jụụ?” N’ihi na ebili mmiri nọ na-akawanye njọ n’oké osimiri ahụ. 12 O wee sị ha: “Bulienụ m tụba n’ime oké osimiri, oké osimiri a ga-adakwara unu jụụ; n’ihi na m maara na ọ bụ n’ihi m ka oké ifufe a ji efekwasị unu.”+ 13 Ma ndị ikom ahụ gbalịrị ịkwọsi ụgbọ ahụ ike, ka ha wee kwọghachite ya n’ala akọrọ; ma ha enweghị ike, n’ihi na ebili mmiri+ nọ na-akawanye njọ n’oké osimiri ahụ, na-adọghachi ha azụ. 14 Ha wee kpọkuo Jehova, sị:+ “Ewoo, Jehova, biko, ka anyị ghara ịla n’iyi n’ihi mkpụrụ obi nwoke a! Emekwala ka ọbara+ na-emeghị ihe ọjọọ dị anyị n’isi, ebe ọ bụ na gị onwe gị, Jehova, emewo ihe masịrị gị!”+ 15 Ha wee bulie Jona tụba n’ime oké osimiri; oké osimiri ahụ wee malite ịda jụụ.+ 16 Ndị ikom ahụ wee tụwa egwu Jehova nke ukwuu,+ ha wee chụọrọ Jehova àjà,+ kwekwa ya nkwa.+ 17 Jehova wee mee ka otu nnukwu azụ̀ loo Jona, nke mere na Jona+ nọrọ n’afọ azụ̀ ahụ ụbọchị atọ, ehihie na abalị.+